सधै फेल मात्र हुने प्रहरीका दुर्इ एसपी को हुन ? - A complete Nepali news portal based on news & views political, economy, sports, analytical reports, entertainment, social, national-international news
सधै फेल मात्र हुने प्रहरीका दुर्इ एसपी को हुन ?
१८ श्रावण २०७५, शुक्रबार ०९:२० August 3, 2018 Nonstop Khabar
काठमाडौं, १८ साउन । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको एपीएफ कमान्ड तथा स्टाफ कोर्षको प्रवेश परीक्षामा दुई जना उपरीक्षक (एसपी) अनुत्तीर्ण भएका छन् । अनुत्तीर्णसँगै उनीहरुको स्टाफ कोर्ष यात्रामा पूर्णविराम लागेको छ । बढुवालगायत अन्य वृत्तिविकासमा समेत उनीहरु अब निकै पछि पर्नेछन् ।